Andranomanalina : trano roa kilan’ny afo, fianakaviana ampolony traboina | NewsMada
Naharitra ora maromaro vao maty ny afo tamin’ilay haintrano teny Andranomanalina, afakomaly alina. Tsy nisy noraisina intsony ny entana tao an-trano. Sahirana ny mpamonjy voina tamin’ny fifehezana ny afo…
Ny akanjo teny an-koditra sisa! Nijoalajoala tsy nisy toy izany ny afo vokatr’ity haintrano teny Andranomanalina ity. Voalazan’ireo niharam-boina fa tamin’ny 10 ora alina no nanomboka ny firehetana taorian’ny fipoahan’ny herinaratra. Niainga avy ao amin’ny trano lehibe iray misy rihana ny afo ary niampita tamina tranohazo iray mifanila amin’ity trano lebibe ity hatrany. Indray mipetraka amin’ity trano lehibe ity ireo fianakaviana maromaro izay samy tsy nisy afaka namonjy ny entana tao an-tranony intsony noho ny fijoalajoalan’ny afo. Niha-niitatra rahateo ny afo noho ny fitsokan’ny rivotra. “Fipoahan-jiro niampy nitselatselatra no henonay mialoha ny firehetana. Taitra daholo ny rehetra ka samy nikoropaka nivoaka ny trano. Trano efa nirehitra anefa no hitanay”, hoy ny fitantaran’ny raim-piakanaviana iray niharam-boina. Raikitra ny fifanjevoana taorian’izay ary nanao izay ho afany tamin’ny famonoana ny mponina teo an-toerana mialoha ny nahatongavan’ny mpamonjy voina. Kila hotohoton’ny afo ny entan’ireto fianakaviana ireto ary tsy nisy azo natao intsony.
Tonga namono ny afo ny mpamonjy voina taorian’izay, saingy sahirana tanteraka izy ireo tamin’ny famonoana. Tery rahateo ny elakela-trano miditra ao amin’ity toerana nitrangan’ny famaizana ity, manginy fotsiny ny fisian’ireo andian’olona marobe mifanjevo nandritra ny firehetana. Fianakaviana ampolony, araka izany, no traboina tamin’ity loza ity.